Maitiro ekuvandudza kubva Fedora 27 kuenda Fedora 28? | Linux Vakapindwa muropa
Nekuburitswa kutsva kwaFedora nezuro, kwatakataura pano iyo blog, pachave nevashandisi vazhinji vanoda kuyedza iyi vhezheni nyowani uye zvakare avo vanoda kugadzirisa yavo system kune iyo nyowani vhezheni kugadzikana kweizvi.
Ndokusaka isu tinogovana newe nzira yakapusa yekugadzirisa masystem ako kune iyi nyowani vhezheni yeFedora 28. Izvo zvakakosha kusimbisa kubva pakutanga kuti inokurudzirwa kuchengetedza ako akakosha mafaera, sezvo pasina munhu anosunungurwa pakuve nekanganiso panguva iyi maitiro uye nekugona kuve neruzivo rwekurasikirwa.
Nekungochengeta zvakapusa kweFolder yako folda uye iwo mafaera aunofunga akakosha mune kumwe kugovera kana dhisiki, uchave nechokwadi, pakupera kwemaitiro kana zvese zvikafamba mushe uchakwanisa kudzima iyi backup.
1 Ndiwedzere maitiro kubva Fedora 27 kusvika Fedora 28
1.1 Kusimudzira kubva Fedora 27 kusvika Fedora 28 nenzira yakajeka
1.2 Gadziridza Fedora kubva kumagumo
Ndiwedzere maitiro kubva Fedora 27 kusvika Fedora 28
Kugadziridza yedu system isu tine nzira mbiri dzeichi:
Ne Graphic nzira
Nekushandisa mirairo kubva kune iyo terminal.
Kusimudzira kubva Fedora 27 kusvika Fedora 28 nenzira yakajeka
Kune avo vashandisi avo vanofarira mukana wekuti vaite izvi nemabatiro mashoma, Isu tinotarisira pane iyo ficha iyo iyo yekugovana ichagovana nesu muSoftware Center.
Ingovhura iyo Gnome software Center kubva kune yedu yekushandisa menyu.
Kana iyo yekuzivisa ziviso isingaoneke pachiratidziri ichi, tinogona kuyedza kurodha pasi iyo skrini nekudzvanya pane reload chishandiso kumusoro kwepamusoro kuruboshwe. Zvinogona kutora nguva kuti uone iripo inovandudzwa.
Kana iyo ziviso yatove yakaoneka Isu tinongofanirwa kusarudza kurodha pasi ekuvandudza mapakeji.
Panguva iyi tinogona kushandisa system kazhinji, chete pakupera kwekurodha pasi uye kugadzirisa maitiro, iwe uchazoziviswa uye ikozvino nekuchengeteka kwakazara Tinogona kutangazve sisitimu uye nekushandisa iyo yekuvandudza.
Kana kutangazve kwapera, iwe unozokwanisa kutanga yako mushandisi chikamu uye tarisa shanduko dzakaitwa mune yako system
Gadziridza Fedora kubva kumagumo
Iye zvino kana iyo yekuvandudza isingaoneke mune yako software nzvimbo kana iwe uchida kuzviita nenzira iyi, tinogona kuita iyo yekuvandudza kubva Fedora 27 kusvika Fedora 28 nerubatsiro rweiyo dnf yekuraira.
Asi kutanga kwezvose Inokurudzirwa kwazvo kutanga kugadzirisa ese mapakeji edu yedu yazvino vhezheni.
Chete isu tichafanirwa kuvhura terminal uye nekuita unotevera kuraira kugadzirisa yedu system mapakeji:
Waita izvi izvozvi isu tinofanirwa kuisa plugin izvo zvichatibatsira nehurongwa hwekuvandudza, nekuti izvi isu tinongofanirwa kuita unotevera kuraira mune terminal
Wakatogadza plugin ye dnf, nemapakeji akagadziridzwa uye negadziriro yeparutivi. PTinogona kuita zvakachengeteka system yekuvandudza rairo.
Chete pane iyo terminal yatinofanira kuendesa:
Ongorora: Kana iwe uchinetseka kugadzirisa nekuda kwekutyora kutsamira kana echinyakare mapakeji, wedzera iyo- inogonesa mureza mune iri pamusoro rairo. Mureza uyu unobvisa mapakeji ari kuvharira Fedora kugadzirisa.
Munguva iyi maitiro, ese mapakeji anozotorwa pasi kuitira iyo system yekuvandudza, saka izvi zvinogona kutora zvishoma zvese izvi zvinoenderana netiweki yako yekubatanidza.
Kana iwo wekumusoro kuraira wapedza kurodha pasi zvese zvakagadziriswa, yako system yagadzirira kugadzirisa. Kuti utange yako system mune yekuvandudza maitiro, nyora unotevera kuraira mune terminal:
Zvaitwa ino yedu system ichatangazve uye iyi yekutangazve ichatora chinguva chidiki, sezvo kurongeka kuri kuita kuri kuitwa kugadzirisa iyo system.
Usaora mwoyo, unogona kutora nguva panguva iyi.
Pakupera iwe unogona ikozvino kutanga yako mushandisi chikamu mune nyowani vhezheni yesystem.
Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti pawakadzorerazve system yandakatanga neiyo Fedora 27 kernel, unogona kudzoreredza system yako zvakare kuti uone kuti panguva ino yatotanga naFedora 28.
Uye neizvozvo iwe unotova neiyo nyowani Fedora 28.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekuvandudza kubva Fedora 27 kuenda Fedora 28?
Walter V akadaro
Pindura kuna walter V
Pindura kuna ramsuke
Iyi ndarama, maita basa !!
Pindura kune io
Ini ndakaisa vhezheni 27 uye ndiri kuimutsidzira izvozvi kuita vhezheni 30, ini ndakatevera nhanho dzakafanana chete izvozvi pachinzvimbo che28 ndakaisa makumi matatu, hahaha ndatenda zvikuru ndinovimba zvese zvichafamba mushe, ndichatarisa muforamu maitiro ekuisa Android studio .
Thanks zvekare uye nezve
Izvo hazvina kuomesa kuisa Android studio muFedora, chaizvo zviri kungomhanya iyo .sh faira iri mukati mekushandisa dhairekitori uye mugadziri anotarisira zvimwe zvese.
Chandinorangarira ndechekuti kana Android Studio iri mukati meFedora repositories, mune dzidziso hongu, sezvo iri application iro rinenge rese Linux distro rine mukati mezvinyorwa zvavo.
Maitiro ekuisa Gimp 2.10 paGnu / Linux